Dowladda Oo Sidii ay Dooneeysay Ugu dhawaaqday Natiijadda baaritaanadii Qaraxii Xarunta G/Banaadir -
HomeWararkaDowladda Oo Sidii ay Dooneeysay Ugu dhawaaqday Natiijadda baaritaanadii Qaraxii Xarunta G/Banaadir
Dowladda Oo Sidii ay Dooneeysay Ugu dhawaaqday Natiijadda baaritaanadii Qaraxii Xarunta G/Banaadir
August 9, 2019 F.G Wararka 0
Dowladda Soomaaliya ayaa war kasoo saartay Qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 24 kii Bishaan lasoo dhaafay, islamarkaana uu ku geeriyooday Gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
Warka kasoo baxay Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa ku saabsanaa natiijadda baaritaanadii ay waddeen maalmihii ugu dambeeyay.
• Ugu horayn, Dowladda Soomaliyeed waxay tacsi u diraysa intii ku dhimatay, sidoo kale caafimaad deg deg ah u rajaynaysa intii ku dhaawacantay falki foosha xumaa ee ka dhacday Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar.
• Dowladda Soomaliya ayaa cadaynaysa falkaasi in uu ahaa dhibato loogeestay Shacabka Soomaliyeed.
• Baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen Hay’adaha Amniga ayaa lagu ogaaday in ay is qarxisay ruux nafteed haligto ah oo Dumar ah; kana shaqaynaysay Dowlada Hoose ee Xamar, ayadoo kaalmo ka heleysay ruux kale oo Dumar ah oo ku qornaa kaaliye, shaqaalana ka ahayd Xaruunta Dowladda Hoose.
• Labada gabdhood ayaa baaritaanku cadeeyey in aan la dhameystirin hubintii loo baahnaay markii la shaqaaleysiinaayay.
• Sida lagu ogaaday baaritaanka, labada gabdhood ayaa fasaxyo isku dhow oo Bil gudeheeda ah wada qaatay, iyadoo xogta qaar ay tilmaamtay in ay tageen goobo ay maamulaan Argagixisada.
• Nafteed haligtaha ayaa si qaldan ugu tagri fashay caadifaddii ay u hayeen madaxda iyo dadka ay la shaqeynaysay, maadaama ay ka mid aheyd dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Uga dambeen, waxaan Bulshada Soomaliyeed la wadaagaynaa mar labaad in falkaas Argagixiso ee ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose loo soo qab qabtay dad lagu tuhunsanyahay in ay ku lug yeelan karaan falkaas, lana hor gaynayo Hay’adaha Garsoorka ee ku shaqada leh.
Si Kastaba Ha ahaatee Sida ay dowlada dhexe ay baaritaanka u sameeysay ayaan aheeyn mid lagu kalsooonaan karo waayoo meesha waxaa jira warar is diidan oo aan surta gal aheeyn Waxaana ka mid ah ma jiro cid loo qabtay falkaasi
“Hadii la leeyahay Gabar ayaa isqarxisay Sua,aal waxa ah yaa u qaaday alaabta ay meesha la gashay ” Maxaa looga arki waayay gabadha oo isqarxinayasa CCTV kaamirada mesha ku xeran Wararkaasi ma naqan karaan kuwa lagu kalsoonaan karo ayay leeyihin ahelada Guddomiyaha AUNAXARISTEE ENG YARIISOOW,